Dassault mara mma / Dornier Alphajet-E Site na AlphaBleuCiel ghọrọ FSX nativedị asụsụ nwere ikike iji n’aka JP Bourgeois (Bee Gee). Dakọtara Prepar3D v4 +.
Ihe ngwugwu a gụnyere nwa afọ FSX Ihe atụ nke Bluebear gbanwere, na ntụgharị 34 (gbakwunyere Patrouille de France Flyboys set), Igwe igwe na Ed Wells. 2D panel na 3D na-arụ ọrụ ọkpụkpọ elu na XML gauges site Philippe Wallaert na Bluebear. Usoro igwe anwụrụ ọkụ na HUD. Callouts nke Jimmy Foong dere, Onyinyo nke Doug Dawson.
Zuru okè maka ịmalite ụgbọelu gị na ezi obi ụtọ iji gosi ikuku ụgbọ elu acrobatic